काठमाडौं । अभिनेत्री साम्राज्ञी राज्यलक्ष्मी शाहले बालीमा खिचाएको फोटोले उनको यति बेला चारै तिर आलोचना भइरहेको छ । उनले प्रेमी देवाङ्क राणासँग खिचाएको अन्तरङ्ग तस्बिरका कारण उनको आलोचना भइरहेको हो । रातो विकनी लगाएको सार्वजनिक केही तस्बिरमा प्रेमी देवाङ्कले उनको ओठ, छाती र कम्मरको पछाडिको भाग चुमेका छन् । यो तस्बिर सार्वजनिक...
काठमाडौं । गतवर्षको तीजमा ‘यतै घमाइलो उतै घमाइलो...’सन्देश मुलक तीज गीत लिएर आएकी सञ्चारकर्मी गीता अधिकारी यसपाली ‘तीजैमा ब्रत बसी...’ भन्दै आएकी छन् । मिलापको प्रस्तुतिमा गीता अधिकारीको शब्द रहेको गीतको भिडियो ‘तीजैमा ब्रत बसी...’ आज राजधानीको पुरानो बानेश्वर स्थित मनसुन क्याफेमा एक कार्यक्रमबीच सार्वजनिक गरिएको हो । नायिका तथा...
काठमाडौ । संखुवासभा चैनपुरमा जन्मेरे विदेशमा आफ्नो नाम दर्ज गराउन कम्मर कसेर लागेकी प्रतिष्ठा (तृष) राउत बेलायतमा हुने सौन्दर्य प्रतियोगिता उपाधी नजिक पुगेकी छिन् । फोटो हिट चरण पार गरेकी तृषा मिस इग्ल्याण्डको फाइनलमा प्रवेश गरेकी छन् । २० हजार आवेदनबाट उनी फाइनलसम्मको यात्रा तय गर्न सफल भएकी छिन् । मिस इग्ल्याण्डको फाइनल जुलाई ३१...
एजेन्सी । प्रियंका चोपडा बलिउडकमा देशी गर्लको नामले चर्चित छिन् । उनले बलिउड सँगै हलिउडमा पाइला चाल्नासाथ उनको लोकप्रियता झन् झन बढ्दै गएको छ । हलिउड रिपोर्टर्सको ग्लोबल सोसल मिडिया क्लाइम्बर्स चार्टका अनुसार हाल प्रियंका सामाजिक संजालमा सबैभन्दा लोकप्रिय व्यक्ति हुन् । चार्टको सूचीमा हालसम्म प्रियंका १२ पटक शीर्ष स्थानमा...
काठमाडौं । अहिलेकी चल्तीकी अभिनेत्री साम्राज्ञी आरएल शाहको रिल र रियल लाइफ दुबै हिट छ । पर्दामा बोल्ड भूमिकामा प्रस्तुत हुँदै आएकी उनलाई विवादले पनि केही वर्षयता राम्रै पछ्याइरहेको छ । कहिले गाउँले भूमिका गर्न अस्वीकार गरेको कारणले उनको आलोचना भयो त कहिले दायाँ स्तनमुनी खोपेको ट्याटुको तश्विर बाहिरिएपछि विवादमा फसिन् । उनको प्रेम...
डिलकुमारि नेपाल काठमाण्डौं । अभिभावक विहिन भएका, शारिरिक तथा मानसिक रुपमा असक्षम र पिछडिएका क्षेत्रका किसोरीहरुलाई लामो समयदेखि संरक्षण दिदै आएको संस्था लाईट हाउस फाउण्डेसन नेपालको आयोजना तथा हिमालयन नेपाली ईभेन्ट म्यानेजमेन्टको ईभेन्ट व्यवस्थापनमा कृष्टिना खड्का, राष्ट्रको गौरव भन्ने मुल नाराको साथ विभिन्न ट्यालेन्ट सो तथा...
काठमाडौं । बलिउड नायिकाहरु मनिषा कोइराला र ऐश्वर्या रायबीच अहिले एकआपसमा मनमुटाव रहेको भारतीय मिडियाहरुले बताएका छन ्। नायिका मनिषा बारे ऐश्वर्याले पनि खुलेरै टिप्पणी गरेको खबर अहिले एकाएक बाहिर आएको छ । बलिउडमा मनिषा कोइराला र ऐश्वर्या राय ९० को दशकका चर्चित नायिका हुन् । त्यो बेलाको विवादको पक्षमा भारतीय सञ्चार माध्यमले अहिले...
काठमाडौं । बलिउड उद्योगमा विन्दास अनि हट अवतारमा प्रस्तुत हुने नायिका हुन् माही गिल। ४० बढी फिल्ममा अभिनय गरिसकेकी माही आफूलाई वास्तविक जीवनमा निकै लजालु स्वभावकी भएको मान्छिन्। उनी एक दबंग महिलाहरूको सूचीमा पनि अटाउने गरेकी छन्। तर, माही आफूले निर्वाह गर्दै आएको अभिनयबाट थाकेकी छन्। उनले बिबिसीसँग भनेकी छन्, ‘यदि कोही बार गर्ल वा...
मुम्बई । दिवंगत अभिनेत्री श्रीदेवीकी छोरी जान्ह्वी कपुर छोटो समयमै व्यस्त अभिनेत्री बनेकी छन् । आफ्नो पहिलो फिल्म ‘धडक’ सुपरहिट भए पछि यी अभिनेत्री एकै वर्षमा चारवटा फिल्ममा काम गरिरहेकी छन् । धड्कपछि यी नायिकाले नयाँ फिल्म ‘तख्त’को काम गरिरहेकी छन् । करण जौहरकै धडक र तख्त फिल्मपछि यी अभिनेत्रीले जौहरकै धर्मा प्रोडक्सनको...
काठमाडौं । बेला बेलामा चर्चामा आइरहने नेपाली नायिका हुन् साम्राज्ञी राज्यलक्ष्मी शाह । पछिल्लो समय नेपाली फिल्ममा डिमान्डेड बनेकी साम्राज्ञी सामाजिक सञ्जालमा शेयर गर्ने हट तस्वीरका कारण समेत चर्चामा रहन्छिन् । यतिबेला साम्राज्ञी इन्डोनेसियाको बालीमा पुगेकी छिन् । त्यहाँ उनले आफ्नो फुर्सदको समय बिताइरहेकी छिन् । बालीको समुद्रमा...
एजेन्सी । भारतीय फिल्म उद्योगमा केही अभिनेत्रीहरुले आफूलाई टिकाइराख्नका लागि विभिन्न हत्कण्डाहरु गरिरहेका हुन्छन् । उनीहरुले फिल्मी क्षेत्रमा आफूलाई टिकाइराख्नका लागि अंग प्रदर्शनको साहारा लिइरहेका हुन्छन् । ‘हट’ सिनहरु दिएपनि कतिपय अभिनेत्रीहरु टिक्न सकिरहेका छैनन् । जसमध्ये केही भने यस्तै हट सीनका कारण फिल्म उद्योगमा...
आर.जी. काठमाडौं । विगत ४० वर्षदेखि फिल्मी क्षेत्रमा एकलौटी राज गरेर बसेका फिल्मकर्मी र ३ वर्षअघि चौथो पटक विवाह बन्धनमा बाँधिएका छविराज ओझा र अभिनेत्री शिल्पा पोखरेलबीचको झगडाले निकै चर्चा पाएको छ । यो बहस बाहिर मिडियामा मात्र नभएर सदनमा समेत चलेको कुरा सर्वत्र छाइरहेको छ । घर झगडाले गर्दा नै अहिले उनीहरुको सम्बन्धमा ‘दरार’ आइरहेको छ...
काठमाडौं । रेश्मी कार्की र शोभा गौतमको स्वरमा ‘तीज आयो लौ तीज आयो’ बोलको गीत बजारमा आएको छ । युटुब च्यानल ओएसआर डिजिटलले बजारमा ल्याएको गीतमा शब्द रचना गोबिन्द गौतमको रहेको छ । उक्त गीतमा व्यवस्थापन उदयराज पौडेले भरेका छन् भने विकास चौधरीले संगित रहेको छ । गीतमा मोडल एवं नायिका अनु शाह लगायतको अभिनय रहेको छ । ...
काठमाडौं । फेस अफ मारवाडी एउटा समुदायमा आधारित सौन्दर्य पेजेन्ट हो । हाल यसको दोस्रो संस्करण होटल डेल अन्नपूर्ण, दरबारमार्गमा हुन गईरहेको छ । यसको पहिलो संस्करण होटल सोल्टीमा सम्पन्न भएको थियो जस्ले अपार सफलता र माया बटुलेको थियो । यी दुई संस्था– Page3Services Pvt. Ltd. र Page3Haute Couture नै यस फेस अफ मारवाडी प्रतियोगिताका जन्मदाता हुन् । यस वर्ष...
काठमाडौं । कलाकार कृष्णप्रसाद धिताल (धिताल चिरिच्याँट्ट) ले आफनो तेस्रो गीतको म्युजिक भिडियो सुनमा सुती फलाम चोर्ने देश चिरिच्याँट्ट इन्टरटेन्मेन्ट नेपाल युटुबबाट सार्बजनिक गरेका छन् । विगत एक दशकदेखि हाँस्यब्यङग्य तथा नाटकमा सक्रिय धितालले राजनैतिक ब्यबस्था फेरिएपनि जनताको जिबन स्तर नफेरिएको , देशमा सम्भाबना हुदाहुदै बिदेश...